भीमोदय मावि चितवनका प्रअ डा. कँडेललाई ‘एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक अवार्ड’ – Saurahaonline.com
चितवन : भीमोदय मावि चितवनका प्रधानाध्यापक डा. हरिप्रसाद कँडेल एसियन लिडरशिप अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । ५० भन्दा बढी विधामा विश्वभरिका सयौं व्यक्तिहरुलाई दिईने यो पुरस्कारको बिजेताहरु घोषणा हुने क्रम शुरु भएको छ । यसै क्रममा नेपालका डा. कँडेललाई उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक भन्दै (Research under literal access (RULA)international award ) अवार्डका लागि छनोट गरिएको हो ।